Funda indlela yokudibanisa isenzi "Sungisa" (Ukulungisa)
Indlela yokudibanisa "Ukulungisa" (Ukulungiswa) ngesiFrentshi
Jonga "Ukuchaneka" IsiPhelo kulezi ziLungiso zoLwimi
NgesiFrentshi, uzakusebenzisa isenzi ukulungisa "ukulungisa." Xa ufuna ukuthetha "ukulungisa" okanye "ukulungiswa," isenzo sokudibanisa sifanelekile kwaye esi sifundo siya kukuhamba ngaleyo ndlela.
Ukudibanisa isenzi sesiFrentshi Ukulungisa
Iilwimi zokubambisana zifuneka ukuba zivakalise ukuba ngaba isenzo senzeka kwixesha elidlulileyo, elikhoyo okanye elizayo. NgesiNgesi, sisebenzisa-kwaye sinokuphela, kodwa kunzima ngakumbi kwisiFrentshi.
Oku kungenxa yokuba isenzi sitshintsha ngesigama sesigama kunye nexesha.
Ulungiso luguqulelo lwesipelingi kwaye lwenza lukhohlise, ngakumbi xa lubhala. Ngelixa iilwimi zihlala zifana, uya kuqaphela ukuba ezimbalwa zale mibono ziguqula i- to- to- gi- . Oku kwenziwa kwimivo yokugcina isandi 'G' esifanelekileyo.
Sebenzisa itafile ukuze ufunde iindidi ezahlukeneyo zokulungisa . Uya kufana nesigama sesigxina - i , u, sisi , njl njl. - kunye nexesha langoku, elizayo okanye elingapheleli. Ngokomzekelo, "Ndikulungisa" " ndilungisa " kwaye "siya kulungisa" ngu " sisi corrions ."
lungisa corrigerai i corrigeais
lungiswa i corrides i corrigeais
lungisa i corrigera lungisa
izilungiso iorriji iiborri
lungisa lungisa lungisa
lungisa lungisa lungiswa
Ukuthatha Inxaxheba Kwangoku Kulungiswa
Ukwenza inxaxheba ekukhoyo yokulungisa , - intsimbi iyongezwa kwisenzi sesenzi.
Oku kuvelisa ukulungiswa kwaye isebenza njengesigqibo, i-gerund, okanye isibizo kunye nesenzi.
I-Corriger 's Past Participle kunye nePassé Composé
I- passé compé yindlela eqhelekileyo yokubonisa ixesha elidlulileyo "lokulungiswa." Ukusebenzisa le nto, kufuneka uqale udibanise ibhola , eyincedisayo okanye "ukunceda" isenzi . Ixesha elidlulileyo iqela corrigé longezwa ukugqiba eli binzana.
Ngokomzekelo, "ndilungisile" ngu " je corrigé " kwaye "sikulungise" " sisilungisile ." Phawula indlela i- ai kunye ne-conjugates ye- poss kunye nokuba inxaxheba esedlulileyo ayitshintshi.
Okulula ngakumbi Ukulungiswa kweendlela zokufunda
Abafundi beFrentshi beqala ukugxila kwiindlela ezidlulileyo, ezikhoyo kunye neemeko ezizayo zokulungisa . Noko ke, kukho iziganeko xa kukho enye imigaqo elandelayo.
Isimo sesigxina sesigxina sisetyenziswe xa isenzo singenakuqinisekiswa okanye sizithoba. Ngokufanayo, imo yesimo sengqondo igcinwe kula maxesha xa isenzo sinokuthi okanye singenzeki ngenxa yokuba kuxhomekeke kwinto ethile.
Kungenzeka ukuba awuyi kusebenzisa i-passé elula kuba iyalisebenzisa ekubhalweni kwesiFrentshi ngokusemthethweni. Nangona kunjalo, kufuneka ukwazi ukuwaqhagamshelanisa kunye nokulungisa . Kuyafana okufanayo kwifom yokungapheleli .
lungisa corrigerais lungisa i-corrigeasse
lungiswa corrigerais ulungiso zilungiso
lungisa lungisa lungisa lungisa
iiborri i corrigerions lungiso ulungiso
lungisa corrigeriez lungisa i-corrigeâtes corrigeassiez
lungisa ulungiso zi lungise ulungiso
Ifom yokwenza isicelo isenokuba luncedo.
Oku kusetyenziswa ngokufutshane kunye nemiyalelo ngokuthe ngqo. Xa usebenzisa i-imperative, isivakalisi sesifundo asifunwa, ngoko unokuthi " lungisa " kunokuba " ulungise ."
Izenzi zesiFrentshi zePerception and Feelings: Indlela yokuzisebenzisa
Ukudibanisa kwamaVenzi rhoqo kwiMeko yokuQinisa
Ukudibanisa isenzi sesiFrentshi esingavumelekanga 'Ukuqhuba' ('ukuya kuDrayivu')
"U-Enseigner" (ukufundiswa) njani?
Nguwuphi umguquleli we-intanethi ophezulu?
Funda indlela yokusebenzisa i-Current Continuous Tense
Ukusebenzisa iiVebhu zaseSpain 'Ver' kunye 'Mirar'
Amanina angamaKristu angamaBanyana
Isingeniso kwiinkampani ze-Anasazi Puebloan